Waa maxay sababta ay noogu adag tahay inaan dadka kale wax u sharaxno
Hubaal inaad waxtarla'aan isku dayday ugu yaraan hal mar inaad saaxiib u sharaxdo sida ay wax u shaqeeyaan. Waxa ay kula muuqatay in aad u sharaxday wax walba si ka sahlan sidii hore, laakiin wali wuu gaadhi kari waayay ilaa dhamaadka. Ma aha in saaxiibkaa uu aad u carrab la'yahay. Waxa aad si fudud ugu xidhan tahay qallooc xagga garashada ah oo loo yaqaan inkaarta aqoonta.
Macallimiintu inta badan way la kulmaan isaga. Waxay ilaaween in heerka aqooneed ee ardaydu uu aad uga duwan yahay tooda. Sidaa darteed, waxay adeegsadaan ereyo iyo tibaaxo adag oo aan had iyo jeer u caddayn kuwa bilowga ah. Qalloocaasina wuu ina wada saameeyaa.
Waxay nooga muuqataa in kuwa kale ay garanayaan sideenna oo kale.
Tani waa sida saxda ah qaladka fikirka ee loo yaqaan inkaarka aqoonta. Sannadkii 1990kii, cilmi-nafsiga Elizabeth Newton ayaa soo bandhigtay EL Newton. Jidka dhagaxa leh ee ka yimaada ficilada ilaa ulajeedada falkeeda inta lagu jiro tijaabada. Qaab-dhismeedkeeda dhexdiisa, ka qaybgalayaasha qaarkood waxay ku qasbanaadeen inay garaacaan laxanka hees caan ah oo miiska saaran, qaar kalena waxay ahayd inay qiyaasaan magaceeda.
Midka horena wuxuu ahaa inuu qiyaaso sida ay suurtogal u tahay in laxankooda la qiyaaso. Celcelis ahaan, waxay magacaabeen itimaalka 50%. Dhab ahaantii, 120 ka heesood, dhegaystayaashu waxay qiyaaseen saddex keliya. Taasi waa, itimaalka dhabta ah wuxuu ahaa 2.5%.
Maxay filashooyinka iyo xaqiiqadu u kala duwanaayeen? Xaqiiqdu waxa ay tahay in dadkii garaaci jiray ay laxankii ay madaxa ka rabeen in ay ku shubaan, garaacii miiskana ay u buuxiyeen. Way ku adkayd in ay qiyaasaan in laga yaabo in aan heesta la aqoonsanayn. Laakiin dhagaystayaasha waxay u ahayd nooc ka mid ah code Morse aan la fahmi karin. Wax yar bay ka tidhi waxa ka dambeeya. Kuwa xog dheeraada haya way ku adag tahay inay fahmaan kuwa yar ama aan haba yaraatee war hayn.
Waxaan illownaa aragtida qof kale
Qof kastaa waxa uu adduunka ku eegaa sida ay wax u arkaan. Si aad u xasuusato in kuwa kugu xeeran ay leeyihiin khibrad ka duwan, waxaad u baahan tahay inaad si miyir leh u cadaadiso. Sidaa darteed, way adag tahay inaad qof baro waxa aad naftaada taqaan, oo xitaa qiyaas SAJ Birch, P. Bloom. Inkaarta aqoonta ee ku saabsan ka-hortagga caqiidooyinka beenta ah / Sayniska Cilmi-nafsiga ee uusan wax fikrad ah ka haysan. Way adag tahay in la fahmo oo la saadaaliyo dhaqankiisa marka horeba lagugu habaaray aqoonta.
Tusaale ahaan, ciyaartoyga xirfadda leh, dhaqdhaqaaqa bilawga ahi wuxuu u ekaan karaa wax lagu qoslo, si cad u cilladaysan. Waxa kaliya oo uu hore u bartay farsamada saxda ah mana xasuusto waxa ay tahay in uu ku dhaqmo aqoontan la'aanteed.
Tani waxay ka dhacdaa meel kasta. Maareeyayaasha iyo shaqaalaha, suuqlayda iyo macaamiisha, saynisyahano iyo dadka ay wax u sharxaan, dhammaan inta lagu jiro isgaadhsiinta waxay la ildaran yihiin macluumaadka qalloocan, sida kuwa tune-qaatayaasha iyo dhegaystayaashooda.
Laakiin tan waa lala dagaallami karaa
Naftaada xasuusi eexdan garashada. Qof kastaa ma yaqaan adiga oo kale.
Had iyo jeer kala saar ereyada iyo fikradaha adag haddii aad ka hadlayso shir ama aad si fudud wax ugu sharraxayso kuwa aan xirfadlayaasha ahayn. Xitaa haddii macluumaadkani kuugu muuqdo mid cad.
Sii tusaalooyin gaar ah. La wadaag sida fikradda loo hirgeliyay nolosha dhabta ah. Ha siin xaqiiqooyin qalalan, laakiin sheekooyin: way cad yihiin oo si wanaagsan ayaa loo xusuustaa.
Weydii haddii wax walba ay cad yihiin marka qof wax baraya. Weydii qofka inuu ku celiyo waxa uu ku yidhi afkiisa.
Naftaada geli qofka aad la hadlayso. U soo bandhig aragtidiisa iyo heerka aqoontiisa si aad si fiican ugu fahamto falcelintiisa.
Kozmik Panda wuxuu hayaa buug ka hadlaya sida maskaxdeenna ay noo khiyaanayso. Dhexdeeda, iyada oo ku saleysan sayniska, waxaan ku falanqeyneynaa kala duwanaansho garashada garashada midba mar waxaanan kuu sheegaynaa sida aad uga fogaan lahayd khadadka fikirka.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Waa maxay sababta ay noogu adag tahay inaan dadka kale wax u sharaxno!